किन असाध्यै सुुन्दरी हुन्छन इरानी युवती ? छक्कै पार्ने यस्तो छ ८ रहस्य – live 60media
इरानी महिला आकर्षक हुनुमा उनीहरुको खानपानले पनि काम गरेको छ । भनिन्छ, उनीहरु खानपानमा ज्यादै सर्तक छन् । इरानी महिला आकर्षक हुनुमा उनीहरुको जन्मजात गुण त छँदैछ, त्यसमाथि उचित खानपान नै हो ।इरानी महिलाहरुले आफ्नो डाइटमा माछा र ओखर सामेल गर्छन् । उनीहरु मह पनि नियमित रुपले सेवन गर्छन् ।
← पाकिस्तानी दु’श्मनले हानेको गो’ली निधारमा लागेर ढ’लेका प्रेमको अधुरै रह्यो बुलेट चढ्ने सपना..
! नन्दराजले खुट्टाले लेखेरै मास्टर्स डिग्री…हेर्नुहोस् । सक्दो सेयर गर्नुहोस् । →